Maleeshiyo katirsan Galmudug oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyo katirsan Galmudug oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha gobolka Mudug
June 14, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyo katirsan Galmudug oo ugu yaraan shan qof ku dilay gudaha gobolka Mudug. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa la dilay 10 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii maleeshiyo katirsan Galmudug ay beegsadeen dad shacab deegaanka Laan-Qawar ee degmada Jariiban, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, wadahadalo fool-ka-fool ah oo u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug ayaa istaagay kadib weerarkan cusub.
Shalay oo Talaado ahayd, wasiiro ka socda Puntland iyo Galmudug ayaa gudaha magaalada Gaalkacyo ka bilaabay wadahadalo, ujeedada wadahadalada ayaa ah sidii loo xasilin lahaa gobolka Mudug.
August 26, 2017 Dowladda Soomaaliya oo baaritaan ku sameyn doonta dilkii dadka shacabka ahaa ee deegaanka Bariire
Duqa Muqdisho oo sheegay in Isgoyska Zoobe loo bixiyay ’14 Oktoobar’ si loogu xasuusto dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay halkaas
Muqdisho-(Puntland Mirror) Isgoyska Zoobe ee kuyaala Muqdisho kaasoo dhawaan uu ka dhacay qaraxii weynaa ayaa magacii laga badalay waxaana loo baxshay “14 Oktoobar”, sida uu sheegay duqa Muqdisho. Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo maanta [...]
Washington-(Puntland Mirror) Aabaha Ilahaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah oo katirsan Gongress-ka Mareykanka, ayaa xanuunka coronavirus u geeriyooday, sida ay Ilhaan ku sheegtay bayaan habeenimadii Isniinta. “Waxay ahayd murugo weyn iyo murugo in aan [...]
Ciidamada booliiska Puntland ee gobolka Bari oo gacanta ku dhigay ninkii dilay guddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ee gobolka Bari ayaa gacanta ku dhigay ninkii dilay guddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari, sida uu sheegay sargaal booliiska ah. Taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bari Kornayl Cabdixakiin Xuseen Yuusuf ayaa [...]